Milina fanamarihana laser fibre tsara indrindra BL-PMF30A mpanamboatra sy orinasa | Boln
1.Ny famolavolana birao matevina, mora ho an'ny fitaterana;
2.Ny masinina fanamarihana birao dia afaka mifanaraka amin'ny loharano laser maro;
3.Ny sakana optika misy tombo-kase mazava tsara dia vita amin'ny vovoka sy porofo manohitra ny hovitrovitra;
4.Ny mekanisma fananganana bara roa dia manana fahombiazana bebe kokoa;
5.Ny fitaovana anatiny dia manana fifandraisana tsara sy fanoherana ny fanelingelenana;
6.Ny kabinetra kely dia azo ampidirina amin'ny tsipika famokarana.
7.Ny vanim-potoana fiantohana dia 2 taona ary ny firafitray miorina dia afaka miantoka famokarana 24/7 ary mampihena ny lozam-pifamoivoizana hatramin'ny farany ambany indrindra
8. Miaraka amin'ny masinin'ilay rindrambaiko laser BOLN, ny angona mavitrika toy ny isa serial, barcode, kaody matrix data, anaran'ireo orinasa, isa maro, sns.
9.Ny atin'ny marika dia misy laharana serial, endrika daty, hajia fotoana, famokarana kaody milahatra mandeha ho azy miaraka amin'ny tsindry iray fotsiny, lahatsoratra feno na tsipika, lahatsoratra boribory, kaody 1-D sy 2-D, sary ary sary, antontan-taratasy PDF misy sosona samihafa , fisie sary (jpg, bmp, sns.), rakitra DXF sy PDF misy sosona samihafa;
10. Raha dinihina ny famokarana azo antoka, dia tsy ny fiarovana ny mpandraharaha amin'ny fikirakirana ny sela laser an'ny kilasy laser 2 ihany no tianay holazaina, fa ny singa avo lenta ihany no ampiasaina ary noho izany dia tohanan'izy ireo amin'ny famokarana isan'andro.
11.Ny vanim-potoana fiantohana dia 2 taona ary ny rafitray miorina dia afaka miantoka famokarana 24/7 ary mampihena ny mety tsy fahombiazan'ny famokarana farafaharatsiny.
Teo aloha: Desktop Fiber Laser Marking Machine BL-DMF20A
Manaraka: Masinina fanamarihana laser amin'ny fibre BL-MFP20A / 30A